Phupha ngeNeck Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
I-nape ngumqolo wentamo. Idibanisa umqolo ngasemva kwentloko kwaye, kunye nezihlunu zayo, iqinisekisa ukuba sinokuhambisa intloko kunye nomzimba ongaphezulu phantse kulo naliphi na icala.
Siqonda kuphela ukuba eli candelo lomzimba libaluleke kangakanani kuthi xa izihlunu zentamo, umzekelo, zibuhlungu kuxinzelelo kwaye umzimba uphela uziva uqinile kwaye awushukumi. Ekusebenziseni kwethu iilwimi, sisebenzisa ibinzana elithi "kukho into emqolo" ukubonisa ukuba siziva sinyanzelekile okanye sisoyika. Umntu othanda ukwenza ububi unenkohliso entanyeni.
Ukuba umntu uphupha intamo yakhe, banokufumana iintlungu zentamo okanye ukuqina. Nangona kunjalo, unokubona nentamo yomnye umntu ephupheni. Oku kunokubonakala kudidi oluhle kakhulu, kodwa kukwakho nabantu abaneenkunzi zeenkomo zokwenyani.
Ukutolikwa kwamaphupha, imibuzo malunga nokuba iphupha eli livakalelwa kukuba isimboli yephupha lihle okanye libi, kunye neziganeko ezilandelayo zibaluleke kakhulu.
1 Uphawu lwephupha «intamo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «intamo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «intamo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «intamo» - ukutolikwa ngokubanzi
Njengophawu lokulala ekuchazeni iphupha, intamo iyenza icace into yokuba ukuqonda kunye nokuvavanywa kwendalo ngumba Umbono wekona yi. Ngamanye amaxesha imeko yahluke kakhulu xa utshintsha umbono wakho. Iphupha lilumkisa ukuba umbono wabanye abantu nawo uyamkelwa.
Uphawu lwephupha lubiza xa uphupha ngakumbi uguquko phakathi. Kuphando lwamaphupha, eli candelo lomzimba linokubonisa iimvakalelo ezithile ephupheni. Intamo ebuhlungu luphawu lokukhathazeka, oluhlala ulala ngamandla. Ukuba intamo iziva iqinile kwaye ilukhuni, uphawu lwephupha lubonisa iphupha eliqwalaselweyo kwaye liziva lingonwabanga.
Ukutolikwa kwephupha, ukubonakala kwentamo kubalulekile, kunye nokwenzekayo kuyo. Intamo entle macala onke ifanekisela imbeko, imbi igama elibi. Kwaye intamo eshinyeneyo luphawu lwephupha lokoyikisayo kugula okanye ngokuba ngumntu okrakra.
Ukuba iphupha liphuza umntu entanyeni, lo ngumqondiso ekuchazeni iphupha othanda ukuvumela iimvakalelo zakho zihambe ngokukhululekileyo. Inqindi entanyeni, nangona kunjalo, iyalumkisa iingozi. Ukubona intamo yakho ephupheni kubonisa ukuba iphupha kufuneka lijongane nemicimbi yosapho, ekuthathela kude kwizinto ezibaluleke ngakumbi.
Ukuba umfanekiso wephupha "intamo" uyanconywa njengenxalenye yomzimba womnye umntu, isimo sengqondo esisisiseko sokuthanda izinto eziphathekayo sichazwa kuwo, esinokutshabalalisa ubudlelwane bethu.
Uphawu lwephupha «intamo» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo, intamo ibetha enye njengophawu lokulala. puente phakathi kwengqondo nomzimba. Idibanisa umqolo kunye nentloko, ethi ekuchazeni amaphupha imele ukuqiqa nokuzithiba.
Ngokusebenzisa uphawu lwentamo "intamo", eli candelo liba lelo lomzimba ongalawulekiyo. Ithuku idityanisiwe. Iphupha lilumkisa ngolungelelwaniso phakathi kwendawo yengqondo neyomzimba. Ukugxininisa kakhulu kwenye okanye kwenye kuya kuwonakalisa umphefumlo.
Ukuba intamo iqinile ephupheni, umfanekiso wephupha uhlala ukhomba kwinkani kwaye ubuntu obungenangqiqo phantsi. Intlungu yentamo inokuba ngumqondiso osisilumkiso weengxaki okanye ukungqubana okunobunzima kwi-psyche yephupha ekuchazeni iphupha.
Ukuba intamo iqinile ephupheni kangangokuba iphupha alinakukwazi ukuhamba, eneneni kunzima kuye ukuba eme nkqo kwimeko enzima. sengqondo kunye nokuziphatha okuhle.
Uphawu lwephupha «intamo» - ukutolika kokomoya
Ngengqondo egqithileyo, intamo njengophawu lwephupha imele iinxalenye zokomoya yephupha kunye nendawo yengqondo ngokubanzi, ifanekisela unxibelelwano lwento yoqobo kunye neemvakalelo kunye nomgaqo wobudoda kunye nesizathu.